3 arrimood oo Deni iyo Axmed Madoobe ka sheegeen Muqdisho | Dhacdo
3 arrimood oo Deni iyo Axmed Madoobe ka sheegeen Muqdisho
Madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa maanta qayb ka noqday aasaaska Gole lagu magacaabay “Madasha Badbaado Qaran” iyagoo munaasabaddii daah furka ahayd ka sheegay dhowr qodob oo la xiriira khilaafka siyaasadeed ee Somaliya.
Madasha Badbaado Qaran waxaa ku mideysan Dowlad Goboleedyada Jubbaland, Puntland, Golaha Midowga Musharaxiinta iyo Golaha Siyaasiyiinta Somaliland.
Siciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Maxamed Islaam ayaa magaalada Muqdisho u tagay kulanka wadatashiga qaran ee aan weli lagu guuleysanin inuu furmo.
Labada madaxweyne ayaa si wadajir ah u sheegay in iyagoo kaashanaya golaha musharraxiinta iyo Golaha siyaasadda ee Somaliland metela ay ka qayb qaadan doonaan, sidii Somaliya ay u geli lahayd doorasho heshiis lagu yahay.
1- dib u noqosho
Madaxweynw Deni ayaa sheegay in uu dadaal ku bixin doono wax walba oo horseedi kara dib u noqosho.
“Waxaan rabaa in dadka Soomaaliyeed ay ogaadaan in dalkoodu uu maanta hiil uga baahan yahay, in la ilaaliyo howshii lasoo qabtay wixii ka dambeeyay sanadkii 2000 ee dowlad dhiska Soomaaliya loo soo amaamudayay oo maanta meel laga sii amba qaadi karo joogta. Madashan waa mid u furan cid kasta oo ay u muuqato waxa annaga noo muuqday ee ah oo rabta inay ku darsato sidii dalka looga badbaadin lahaa in uu dib u noqdo,” ayuu yiri Deni.
2- Qori isu dhiib
Madaxweyne Deni ayaa intii uu ka hadlayay munaasabaddii maanta waxa uu eedeyn u jeediyay Dowladda Federaalka.
“Dowladda maanta joogta waxay ku fashilantay geeddigii la waday ee qori isku dhiibka ahaa, in markii xilligeeda lasoo gaaray ay u dhiibto qofkii ku xigay. Waxay u baddashay in aysan jirin cid ka horreysay iyo cid ka dambeysay midna,” ayuu yidhi Deni.
Eedeyntan ayaa qayb ka ah hadalada ay xubnaha mucaaradka iyo madaxda dowlad goboleedyada ee ka soo horjeeda Xukuumadda Federaalka, si joogto ah u soo celceliyaan.
Dowladda Somaliya ayaase dhankeeda ku adkeysaneysa in ay ku guda jirto hannaanka doorashada.
3- Cidna ilama soo xiriirin”
Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo isagana munaasabadda furitaanka Madasha Badbaado Qaran ka hadlayay ayaa sheegay in weli uusan wax xiriir ah ka helin Madaxda Dowladda Federaalka.
“Caawa ayaa 11 habeen ii ah inta aan Magaalada Muqdisho jooggo, ma joogtaa iyo ma timid, nimanka mas’uuliyadda sheeganaya ee guddiyo ayaa shiraya leh, xitaa su’aal la iskama weydiinin, inaan jooggo iyo in kale, ileen anaa isu joogag, anaa isu imid.” ayuu yiri Axmed Madoobe.
Illaa hadda laguma guuleysanin in dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya ay ku heshiiyaan hannaanka doorashada, iyadoo wali uu khilaaf ka taagan yahay qodobbada qaarkood.